EMVA kwemibiko eminingi yobugebengu obenzeka edolobheni ePort Shepstone, amaphoyisa athanda ukuqwashisa umphakathi ngabantu abathi bazokusiza kunoma yini oyenzayo edolobheni. Amaphoyisa athi kunabantu ababhekisisa konke umuntu akwenza ukuze bathole indlela yokumgebenga.
Okhulumela amaphoyisa uZandra Wiid uthe lezinswelaboya zihambe zibheka ukuthi ubani ongagebengeka, ikakhulukazi abantu besifazane.
“Lezigebengu ziphinde zicuthele abantu abahamba bodwa, abaphethe izikwama bese bezama ukuphazamisa uma benganakile,” kusho uWiid.
Amaphoyisa athe abantu abagweme ukuphatha izinto ezidonsa amehlo ezigebengu.
UWiid uthe uma ubanjwa isigebengu kumele uzame ngayo nonke indlela ukuthola usizo ebantwini abadlulayo, noma umemeze ukuze nabantu bezokusiza.
“Akuwona umbono omuhle ukuthi umuntu azame ukulwa nesigebengu uma eyedwa ngoba angagcina elimele. Kumele uzame ngayonke indlela ukuthola usizo ebantwini abaseduzane bese ufonela amaphoyisa, kusho uWiid.